N'ogbe PITA ice cream cup Manufacturer and Supplier | Copak
PITA ice cream
Na COPAK, Crystal doro anya PITA iko ice cream mepụtara. Iko ọ bụla nwere ihe dị mbadamba ma ọ bụ mkpuchi. Enwere ike ibipụta akara ngosi agba na itoolu na arịrịọ maka arịrịọ ndị ahịa.
Disposable plastic PITA ice cream sundae containers na-agbanwe, inogide na mebisie ihe àmà.
Akwa idoanya nke PITA ice cream na-enye visibiliti dị elu, na-arịwanye elu maka ndị ahịa yana ahịa ahịa. Ọmarịcha ụlọ ahịa ice cream, ahịa ahịa, ogige ntụrụndụ, ama egwuregwu, ma ọ bụ nguzosi ike, na-eme mmemme na ihe ndị ọzọ.
Oke kacha mfe ndidi nke PITA ice cream ngwaahịa bụ 70 ℃. Mere, ọ na ọtụtụ-eji nkwakọ ụlọ ọrụ nke oyi ọhụrụ nri na oyi na-atụ ọ drinksụ drinksụ.
Iji kwekọọ na iko ahụ, COPAK na-enye ọtụtụ mkpuchi dị larịị na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide na mkpuchi dome, ma nwee oghere gbara gburugburu, ọkara ọkpọ, ma ọ bụ oghere obe maka iji ahịhịa dị iche iche.
Eco-friendly, odorless, ukwuu uzo, mara mma na na nnabata nke chọrọ nke nri na onunu containers.
1) Ojiji: Wepu-iko plastic maka ihe ọ juiceụ juiceụ, mmiri ara ehi, ice cream, yogọt, nri, salad na ngwaahịa ndị ọzọ.
2) Ihe: Nri nri Polyethylene terephthalate.
3) Size: 5oz, 6oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz
4) Mpịakọta: iko 180ml-350ml, olu dị iche iche dị.
5) Printing: 1-6 agba Flex ebi akwụkwọ & dechapụ ebi akwụkwọ dị.
6) Design: Ahịa logo imewe nabatara.
7) Oge ezipụ: 20-25 ụbọchị ọrụ kemgbe anyị nwetara nkwụnye ego.
8) Akwụkwọ: OA, FDA, SGS, ISO9001 ma ọ bụ dị ka arịrịọ
9) mentkwụ Tergwọ Okwu: T / T. L / C. PayPal.
Zuru ezu ndepụta nke PET ice cream cup:
PITA AKW CKWỌ AKWUKWỌ AKW .KWỌ
Top dayameta cm
nha (Top * Btm * H) cm
gram dị arọ
Qty / katọn
Nke gara aga: PITA Plastic Cup na mkpuchi
Osote: PET Cup mkpuchi
Iko plastik nwere mkpuchi
OEM ODM PET iko
Ifu ndị nwere ike iwepụ
PET Cup emeputa